पत्रुसका अनुभवहरू: सजाय र न्यायसम्‍बन्धी उनको ज्ञान: भाग दुई | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
मानिसहरूलाई विजय गरिएपछि, तिनीहरूसँग कुनै गुञ्‍जायमान साक्षी हुँदैन। तिनीहरूले शैतानलाई लज्‍जित मात्रै पारेका हुन्‍छन्, तर तिनीहरू परमेश्‍वरको वचनको वास्तविकतामा जिएका हुँदैनन्। तिमीहरूले दोस्रो मुक्ति प्राप्त गरेका छैनौ; तिमीहरूले पापबलि त प्राप्त गरेका छौ, तर तिमीहरूलाई सिद्ध पारिएको छैन—यो एउटा ठूलो नोक्‍सानी हो। तिमीहरूले आफू केमा प्रवेश गर्नुपर्छ र केअनुरूप जिउनुपर्छ सो बुझ्‍नुपर्छ र तिनमा प्रवेश गर्नुपर्छ। यदि अन्त्यमा, सिद्ध पारिने कार्यलाई तैँले पूरा गरिनस् भने, तँ वास्तविक मानिस बन्‍नेछैनस् र तँ अफसोसले भरिनेछस्। सुरुमा परमेश्‍वरद्वारा सृष्टि गरिएका आदम र हव्‍वा पवित्र मानिसहरू थिए, अर्थात् अदनको बगैंचामा हुँदा तिनीहरू पवित्र थिए, फोहोरले दूषित भएका थिएनन्। तिनीहरू यहोवाप्रति बफादार थिए र यहोवालाई धोका दिनेबारेमा तिनीहरूलाई केही थाहा थिएन। किनभने तिनीहरूमा शैतानको प्रभावको बाधा थिएन, शैतानको विष थिएन र तिनीहरू सारा मानवजातिमध्ये सबैभन्दा शुद्ध थिए। तिनीहरू अदनको बगैंचामा कुनै पनि फोहोरद्वारा अशुद्ध नपारिएको, देहको वशमा नपरेको अवस्थामा र यहोवाको श्रद्धा गर्दै बस्थे। पछि शैतानको परीक्षामा परेपछि, तिनीहरूमा सर्पको विष पर्‍यो, र यहोवालाई धोका दिने इच्‍छा जाग्यो, र तिनीहरू शैतानको प्रभावमा जिए। सुरुमा, तिनीहरू पवित्र थिए र तिनीहरूले यहोवाको श्रद्धा गर्थे; यो अवस्थामा मात्रै तिनीहरू मानव थिए। पछि शैतानको परीक्षामा परेपछि, तिनीहरूले असल र खराबको ज्ञान दिने रूखको फल खाए, र शैतानको प्रभावमा जिए। तिनीहरूलाई शैतानले बिस्तारै भ्रष्ट बनाउँदै लग्यो र तिनीहरूले मानिसको मूल स्वरूप गुमाए। सुरुमा, मानिसमा यहोवाको सास थियो, ऊ अलिकति पनि अनाज्ञाकारी थिएन र उसको हृदयमा कुनै दुष्टता थिएन। त्यो समयमा, मानिस साँच्‍चै मानव थियो। शैतानद्वारा भ्रष्ट गरिएपछि, मानिस जनावर बन्यो। उसका विचारहरू दुष्टता र फोहोरद्वारा भरिए, तिनमा कुनै असल कुरा वा पवित्रता थिएन। के यो शैतान होइन र? तैँले परमेश्‍वरको धेरै कार्य अनुभव गरेको छस्, तैपनि तँ परिवर्तन वा शुद्ध भएको छैनस्। तँ अझै पनि शैतानको राज्यक्षेत्रमा जिउँछस् र परमेश्‍वरमा अझै पनि समर्पित छैनस्। यो विजय गरिएको तर सिद्ध नपारिएको व्यक्ति हो। अनि त्यस्तो व्यक्तिलाई सिद्ध पारिएको छैन भनेर किन भनिएको हो? किनभने यस्तो व्यक्तिले जीवनलाई वा परमेश्‍वरको कार्यसम्‍बन्धी ज्ञानलाई खोजी गर्दैन, बरु देहको सुख-चैन र क्षणिक सहजताको मात्रै लोभ गर्छ। परिणामस्वरूप, त्यस्ता व्यक्तिहरूको जीवन स्वभावमा कुनै परिवर्तन हुँदैन र तिनीहरूले परमेश्‍वरद्वारा सृष्टि भएको आफ्नो मूल स्वरूप पुनः प्राप्त गरेका हुँदैनन्। त्यस्ता मानिसहरू जिउँदो लासहरू हुन्, तिनीहरू आत्मा नभएका मृत मानिसहरू हुन्! आत्मामा तत्वहरूको ज्ञान खोजी नगर्नेहरू, पवित्रता खोजी नगर्नेहरू, र सत्यताअनुरूप जिउन नखोज्नेहरू, नकरात्मक पक्षमा मात्रै विजय गरिएकोमा सन्तुष्ट हुनेहरू, र परमेश्‍वरको वचनअनुसार जिउन र पवित्र मानिस बन्‍न नसक्‍नेहरू—यिनीहरू त्यस्ता मानिसहरू हुन् जसलाई मुक्ति दिइएको छैन। किनभने, यदि ऊ सत्यविहीन छ भने, परमेश्‍वरका जाँचहरूको अवधिमा त्यो मानिस दह्रिलो गरी खडा हुन सक्दैन; परमेश्‍वरका जाँचहरूको अवधिमा दह्रिलो गरी खडा हुन सक्‍नेहरू मात्रै मुक्ति पाएकाहरू हुन्। म पत्रुसजस्ता मानिसहरू, सिद्ध पारिन खोज्ने मानिसहरू चाहन्छु। सत्यताको उत्कट इच्छा र खोजी गर्नेहरूलाई आजको सत्यता दिइन्छ। परमेश्‍वरबाट मुक्ति पाउन इच्छा गर्नेहरूलाई नै यो मुक्ति दिइन्छ र यो तिमीहरूले मात्रै प्राप्त गर्नुपर्छ भन्‍ने छैन। यसको उद्देश्य तिमीहरूलाई परमेश्‍वरले प्राप्त गर्नुहोस् भन्‍ने हो; तिमीहरूले आफूलाई परमेश्‍वरले प्राप्त गर्न सक्‍नुहोस् भनेर नै परमेश्‍वरलाई प्राप्त गर्छौ। आज मैले यी वचनहरू तिमीहरूलाई बताएको छु, र तिमीहरूले ती सुनेका छौ, र तिमीहरूले यी वचनहरूअनुसार अभ्यास गर्नुपर्छ। अन्त्यमा, तिमीहरूले यी वचनहरूलाई अभ्यास गर्ने समय नै मैले यी वचनहरूद्वारा तिमीहरूलाई प्राप्त गरेको क्षण हुनेछ; यसै बेला, तिमीहरूले यी वचनहरूलाई पनि प्राप्त गरेका हुनेछौ, अर्थात् तिमीहरूले यो सर्वोच्‍च मुक्तिलाई प्राप्त गरेका हुनेछौ। शुद्ध पारिएपछि तिमीहरू वास्तविक मानव बनेका हुनेछौ। यदि तँ सत्यतामा जिउन वा सिद्ध पारिएको व्यक्तिको स्वरूपमा जिउन सक्दैनस् भने, तँ मानिस होइनस्, बरु जिउँदो लास होस्, पशु होस् किनभने तँ सत्यविहीन छस्, र यसको अर्थ के हो भने तँ यहोवाको सासविहीन छस्, त्यसैले तँ आत्मा नभएको मृत मानिस होस् भनेर भन्‍न सकिन्छ! विजय गरिएपछि साक्षी दिनु सम्‍भव भए पनि, तैँले थोरै मुक्तिबाहेक केही पनि प्राप्त गर्दैनस्, र तँ आत्मा भएको जीवित प्राणी बनेको छैनस्। तैँले सजाय र न्यायको अनुभव गरेको भए पनि, यसको परिणामस्वरूप तेरो स्वभाव नवीकरण वा परिवर्तन भएको छैन; तँ अझै पनि तेरो पुरानै व्यक्तित्व होस्, तँ अझै पनि शैतानको स्वामित्वमै छस्, र तँ शुद्ध पारिएको मानिस होइनस्। सिद्ध पारिएकाहरू मात्रै मूल्यवान् छन् र यस्ता मानिसहरूले मात्रै साँचो जीवन प्राप्त गरेका छन्। एक दिन, कसैले तँलाई यसो भन्‍नेछ, “तपाईंले परमेश्‍वरको कामलाई अनुभव गर्नुभएको छ, त्यसैले उहाँको काम कस्तो छ बताउनुहोस्। दाऊदले परमेश्‍वरको कार्य अनुभव गरे, र यहोवाका कार्यहरू देखे, मोशाले पनि यहोवाका कार्यहरू देखे, र तिनीहरू दुवै यहोवाका कार्यहरू व्याख्या गर्न सक्षम थिए, र दुवैले यहोवाको अद्‌भुतता व्याख्या गर्न सक्थे। आखिरी दिनहरूमा देहधारी परमेश्‍वरले गर्नुभएका कार्यलाई तपाईंहरूले हेर्नुभएको छ; के तपाईं उहाँको बुद्धिको बारेमा बताउन सक्‍नुहुन्छ? के तपाईं उहाँको कार्यको अद्‌भुतताको बारेमा बताउन सक्‍नुहुन्छ? परमेश्‍वरले तपाईंहरूलाई के मापदण्ड दिनुभयो र तपाईंहरूले कसरी तिनीहरूको अनुभव गर्नुभयो? तपाईंहरूले आखिरी दिनहरूको परमेश्‍वरको कार्यलाई अनुभव गर्नुभएको छ—तपाईंहरूको सबैभन्दा महान् दिव्यदर्शन के हो? के तपाईंहरू यसबारेमा बताउन सक्‍नुहुन्छ? के तपाईंहरू परमेश्‍वरको धर्मी स्वभावको बारेमा बताउन सक्‍नुहुन्छ?” यस्ता प्रश्‍नहरूको सामना गर्दा तैँले कसरी उत्तर दिनेछस्? यदि तैँले “परमेश्‍वर यति धर्मी हुनुहुन्छ कि उहाँले हामीलाई सजाय र न्याय गर्नुहुन्छ र निर्मम तरिकाले हाम्रो खुलासा गर्नुहुन्छ; परमेश्‍वरको स्वभावले साँच्‍चै नै मानिसको उल्लङ्घनलाई सहँदैन; परमेश्‍वरको कार्य अनुभव गरिसकेपछि, मैले हाम्रो आफ्‍नै पशुत्वलाई जान्‍न पुगेको छु, र मैले साँच्‍चै नै परमेश्‍वरको धर्मी स्वभावलाई अवलोकन गरेको छु” भनेर भनिस् भने, अर्को व्यक्तिले प्रश्‍नलाई जारी राख्‍नेछ, “परमेश्‍वरको बारेमा तपाईंलाई अरू के कुरा थाहा छ? कुनै व्यक्ति कसरी जीवनमा प्रवेश गर्छ? के तपाईंसँग कुनै व्यक्तिगत आकांक्षाहरू छन्?” तैँले यस्तो जवाफ दिनेछस्, “शैतानद्वारा भ्रष्ट पारिएपछि, परमेश्‍वरका प्राणीहरू वनपशु बने, र तिनीहरू गधाहरूभन्दा फरक थिएनन्। आज, म परमेश्‍वरको स्वामित्वमा जिउँछु, र त्यसैले मैले सृष्टिकर्ताका इच्‍छाहरूलाई सन्तुष्ट गर्नुपर्छ र उहाँले जे सिकाउनुहुन्छ सो पालन गर्नुपर्छ। मसँग अर्को कुनै विकल्‍प छैन।” यदि तैँले यसरी सामान्य किसिमले मात्रै कुरा गर्छस् भने, तैँले के भनिरहेको छस् त्यस व्यक्तिले बुझ्‍नेछैन। परमेश्‍वरको कार्यको बारेमा तँसँग के ज्ञान छ भनेर तिनीहरूले सोध्दा, तिनीहरूले तेरा व्यक्तिगत अनुभवहरूका बारेमा सोधिरहेका हुन्छन्। परमेश्‍वरको सजाय र न्यायलाई अनुभव गरिसकेपछि तँमा यसबारेमा के ज्ञान छ भनेर तिनीहरूले सोधिरहेका हुन्छन्, र यसमा तिनीहरूले तेरा व्यक्तिगत अनुभवहरूका बारेमा कुरा गरिरहेका हुन्छन्, र सत्यतासम्‍बन्धी तेरो ज्ञानको बारेमा बताउन तँलाई तिनीहरूले अनुरोध गरिरहेका हुन्छन्। यदि तँ त्यस्ता कुराहरूका बारेमा बोल्‍न असक्षम छस् भने, तँलाई आजको कामको बारेमा केही पनि थाहा छैन भन्‍ने प्रमाणित हुन्छ। तँ सधैँ सतही, वा विश्‍वव्यापी रूपमा थाहा भएका शब्दहरू बोल्छस्; तँसँग कुनै विशिष्ट अनुभवहरू छैन, तेरो ज्ञानमा सारतत्व हुने कुरा त परै जाओस्, र तँमा साँचो गवाहीहरू पनि छैनन्, त्यसकारण अरूहरू तँप्रति विश्‍वस्त हुँदैनन्। परमेश्‍वरलाई पछ्याउने निष्क्रिय व्यक्ति नबन्, र तँलाई जिज्ञासु तुल्याउने कुराको खोजी नगर्। यता न उताको भइस् भने, यसले तँ आफैलाई बरबाद गर्नेछ र तेरो जीवनलाई ढिलाइ गर्नेछ। त्यस्तो असक्रियता र निष्क्रियताबाट तैँले आफूलाई मुक्त गर्नैपर्छ, र सकारात्मक कुराहरूको खोजी गर्ने र आफ्‍नै कमजोरीहरूमाथि पार पाउने कार्यमा तँ सिपालु हुनुपर्छ, ताकि तँ सत्यतालाई प्राप्त गर्न र सत्यतामा जिउन सक्। तेरा दुर्बलताहरूका बारेमा डराउनुपर्ने कुरा केही छैन र तेरा कमजोरीहरू तेरा सबैभन्दा ठूला समस्या होइनन्। तेरो सबैभन्दा ठूलो समस्या र तेरो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको तँ यता न उताको हुनु र सत्यता खोज्‍ने इच्‍छा तँमा नहुनु हो। तिमीहरू सबैको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको जे छ त्यसैमा खुशी हुने र हात बाँधेर पर्खिबस्‍ने तिमीहरूको कायर मानसिकता हो। सत्यताको खोजीमा तिमीहरूको सबैभन्दा ठूलो बाधा र सबैभन्दा ठूलो शत्रु यही हो। मैले तँसँग बोलेका वचनहरू अत्यन्तै गहन भएकोले मात्रै तैँले आज्ञापालन गर्छस् भने, तँमा साँच्‍चै ज्ञान छैन, न त तैँले सत्यतालाई नै बहुमूल्य ठान्छस्। तेरो जस्तो आज्ञापालन साक्षी होइन र म त्यस्तो आज्ञापालनलाई स्वीकृति दिन्‍नँ। कसैले तँलाई सोध्‍न सक्छ, “तपाईंको परमेश्‍वर वास्तवमा कहाँबाट आउनुहुन्छ? तपाईंको यो परमेश्‍वरको सारतत्व के हो?” तैँले उत्तर दिनेछस्, “उहाँको सारतत्व भनेको सजाय र न्याय हो।” अनि उसले आफ्‍नो कुरालाई जारी राख्छ, “के परमेश्‍वर मानिसप्रति करुणामय र प्रेमिलो हुनुहुन्‍न र? के तपाईंलाई यसबारेमा थाहा छैन?” तैँले भन्‍नेछस्, “त्यो त अरूको परमेश्‍वर हो। यो त धर्मका मानिसहरूले विश्‍वास गर्ने परमेश्‍वर हो, र यो हाम्रो परमेश्‍वर होइन।” तँजस्तो मानिसहरूले सुसमाचार प्रचार गर्दा, तैँले साँचो मार्गलाई बङ्ग्याउँछस्, अनि तँसित उपयोगी कुरा के नै हुन्छ र? तँबाट अरूले कसरी साँचो मार्ग प्राप्त गर्न सक्छन् र? तँ सत्यविहीन छस्, र तैँले सत्यताको बारेमा केही पनि बताउन सक्दैनस्, अनि त्यति मात्रै कहाँ हो र, तँ त सत्यतामा जिउन पनि सक्दैनस्। परमेश्‍वरको सामु जिउनको लागि केले तँलाई योग्य तुल्याउँछ? जब तँ अरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्छस्, र जब तैँले सत्यताको सङ्गति गर्छस् र परमेश्‍वरको साक्षी दिन्छस्, यदि तैँले तिनीहरूलाई जित्‍न सक्दैनस् भने, तिनीहरूले तेरा वचनहरूलाई खण्डन गर्नेछन्। के तँ व्यर्थको छैनस् र? तैँले परमेश्‍वरको यति धेरै काम अनुभव गरेको छस्, तैपनि जब तैँले सत्यताको बारेमा बताउँछस् त्यो अर्थपूर्ण हुँदैन। के तँ केही न कामको छैनस् र? तँसित काम लाग्‍ने के छ र? परमेश्‍वरको कार्यलाई त्यति धेरै अनुभव गरेर पनि तिमीहरूसँग उहाँको बारेमा कसरी अलिकति ज्ञान पनि नभएको हो? परमेश्‍वरको बारेमा तँसँग वास्तविक ज्ञान के छ भनी तिनीहरूले सोध्दा, तँ अवाक् हुन्छस्, वा परमेश्‍वर शक्तिशाली हुनुहुन्छ, तैँले प्राप्त गरेको सबैभन्दा ठूलो आशिष्‌ वास्तवमा परमेश्‍वरको उत्थान हो, र परमेश्‍वरलाई व्यक्तिगत रूपमा हेर्न सक्षम हुनु जत्तिको महान् सौभाग्य अरू छैन भनेर केही असान्दर्भिक उत्तर दिन्छस्। यसो भन्‍नुको महत्व के छ र? ती व्यर्थका, खोक्रा शब्‍दहरू हुन्! परमेश्‍वरको कार्यको बारेमा त्यति धेरै अनुभव गरिसकेपछि पनि, के परमेश्‍वरको उत्थान नै सत्यता हो भन्‍ने कुरा मात्रै तैँले जान्दछस्? तैँले परमेश्‍वरको कार्यलाई जान्‍नैपर्छ, त्यसपछि मात्रै तैँले परमेश्‍वरको साँचो साक्षी दिनेछस्। सत्यता प्राप्त नगरेकाहरूले कसरी परमेश्‍वरको साक्षी दिन सक्छन् र?